Matanho makuru e "Hakuna Matata" | Kunyora
Great tattoos of «Hakuna Matata»
Hakuna Matata chirevo chekuti isu tese takaona Iyo Shumba Mambo tingazive uye ichokwadi chirevo chinoburitsa positivity uye yakanaka vibes. Mutsara uyu protagonist yeimwe yenziyo dzisingakanganwike muvhi, asi iwo mutsara chaiwo muchiSwahili saka une chirevo chaicho. Chirevo "Hakuna Matata" chinoreva: "Usazvidya moyo" kana "usazvidya moyo, fara."
Chizvarwa chizere chevana chakakura nemutsara uyu muchikamu chepakati chehupenyu hwavo, pre-kuyaruka. Asi hazvishamisi kuti mutsara uyu wakava kurudziro yeakakurumbira nyora. Hakuna Matata maTatoo anodakadza sedzimwe mhando dzemaTatoo akajairwa senge nyeredzi, mapuruguru kana chirevo chikuru "Carpe Diem".
Meseji yakapihwa simba rakanaka senge "Hakuna Matata" yakakurumidza kugamuchirwa nevanoda kumahombekombe sezvo zvinoita sekunge zvinoreva zvinoreva kurarama wakasununguka. Hazvishamisi kuona vanhu vane mapuratifomu pamahombekombe vane iyi tattoo. Kune avo vanofarira gungwa, Haisi mutsara chete, imararamiro avanoda uye anodada nekutevera. Ivo vanodada vanoratidza avo "Hakuna Matata" matatoo.
Iyi tattoo inogona kuperekedzwa neiyo infinity chiratidzo yekusimbisa izvo zvinhu zvisingakwanise kuchinjwa. Iyo inogona kuve chiyeuchidzo chine simba chekutarisa pairi zvinhu zvisingagoni kudzorwa yeavo vanogona uye iwe unotarisa pane iwo aunogona kuchinja kuti unzwe zvirinani.
Unogona kushandisa masitaera akasiyana etsamba uye uzviite munzvimbo yaunonyanya kufarira pamuviri wako, nekuti itatoo iyo inoshamisa.
1 Hakuna Matata tattoo mhando
2 Ndekupi kwekutora tattoo 'Hakuna Matata'
Hakuna Matata tattoo mhando
Ruvara runogara ruri chiratidzo chakanakira nyora yerudzi urwu. Nekuti sekuziva kwedu, iyo yekupedzisira mvura yekupedzisira inounza musanganiswa wemumvuri watinoda. Uye zvakare, kubata kwekunyanyisa kutaura uye kwakakwana kunogadzirwa kunowedzerwa kune yekutanga meseji. Iwo mavara anowanzoonekwa muinki nhema asi ari pamumvuri wakajeka kwazvo unoshanda sehwaro. Mariri, zvakajairika kuti mavara senge mauve kana bhuruu kuti agare achiungana. Rudzi rwekupaza urwo rwatinoda uye hazvishamise. Inokupa zvese izvo tattoo inoda uye ndeyekuti, pamusoro pekubata kwekupedzisira kune mavara, yakazvipira kune yekutanga.
El chiratidzo chisingaperi uye iyo ye 'hakuna matata' inogona kuenda pamwe chete, kutiratidza chidzidzo mazuva ese ehupenyu hwedu. Nekuti nguva dzinofanirwa kurarama, asi kwete chete nekutarisa pane chimwe chinhu chakanyatsojeka, asi mune ino nyaya inofanana neshanduko, kunyangwe ichigara yakanaka. Naizvozvo, isu tinogona zvakare kuwana mhando dzakasiyana dzematatoo dzinomiririra izvo zvataurwa. Izvo zvakajairika kuona chiratidzo chisingaverengeke panowonekwa mazwi emashiripiti uye uye dzimwe nguva, boka reshiri. Izvo zvinowedzera rusununguko muhupenyu, kune iyo yekupedzisira zvinoreva.
Ndekupi kwekutora tattoo 'Hakuna Matata'
Kune iyo ankle isu tinogara tichisarudza zvidiki uye zvine hungwaru zvigadzirwa. Nekuti nzvimbo yacho inoidawo, hatidi kuichaya zvakare asi kuti nyora yedu ive iyo huru mairi. Nekudaro, yenzvimbo yakaita seiyi, zvakanakisa kusarudza mavara madiki, nekubata kwemavara kana uchida. Kunyangwe chiratidzo ichi chiriwo chimwe cheavo vakasarudzwa panzvimbo ino, sekutaura kwedu, kwenzvimbo yayo.
Kana isu tine kanivhasi yakati kurei, isu tinogara tine sarudzo yemavara, infinity uye nekuwedzera rumwe ruzivo kwairi. Mativi etsoka anosarudzwawo kuti agone pfeka nyora nyora dzerudzi urwu. Izvo zvinogara zvichitsamira pane kuravira kweumwe neumwe, asi ichokwadi kuti munzvimbo ino mazwi maviri ezasi enyora yanhasi nyora nyora zvingave zvirinani, kuti zviite nyore, neingi nhema.
Ichokwadi kuti ruoko runogara rwuri imwe yeaya mapureti atinoda kana zvasvika sarudza nyora. Tine sarudzo dzakawanda uye inzvimbo yakatambanuka inobvuma zvakawanda zvakasiyana. Unogona kutora nyora yako mukati mepamberi, kunyangwe iri munzvimbo yekumashure uye pamusoro pegokora ndiyo imwe yenzvimbo dzayo yakakwana. Asi zvakare mativi uye kunyangwe mawoko akatsanangurwa pakati peakanyanya kufarira. Ehezve, nguva dzose zvichienderana nerudzi rwekugadzira: Kana isu tikasarudza iwo chete mazwi maviri, kana isu tichiashongedza iwo neruvara kana nechiratidzo chimwe chete. Chii chingave chaunofarira?
Unoda mamwe mazano anokurudzira kuti utore iyi "Hakuna Matata" tattoo? Usapotsa iyo inotevera gallery.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Great tattoos of «Hakuna Matata»
Kurota mubati tattoo, ngano mbiri nezve kwayakatangira
Tattoo ine semicolon, ekutanga magadzirirwo